Ny lalao mpitsongo efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao mpitsongo tsara indrindra ho an'ny Android
Eder Ferreno | | Lalao Android, Tutorials
Ny safidin'ireo lalao hitantsika ao amin'ny Play Store dia goavana ankehitriny. Misy lalao ho an'ny tsiro rehetra amin'ny Android. Fomba iray tena tiako ny lalao mpitsongo. Tian'ireo mpampiasa ny tsy maintsy mamaha ny mistery na ny heloka bevava. Noho izany, etsy ambany izahay dia mamela anao hisafidy ireo lalao tsara indrindra amin'ity karazana ity izay ananantsika ankehitriny.
Amin'izany fomba izany, ireo izay te hanana lalao mpitsikilo amin'ny findainao Android, ianao dia ho afaka hahita lohanteny vaovao amin'ireo safidy ireo. Azo antoka fa misy olona manintona ny sainao. Hita ao amin'ny Play Store daholo izy rehetra, ka ho mora aminao ny hihazona azy ireo amin'ny telefaona.
1 Profesora Layton sy ilay vohitra miafina
2 Iza ilay mpamono olona? Fizarana I
3 Tranga Mistery Scooby-Doo
4 NCIS: Heloka miafina
Profesora Layton sy ilay vohitra miafina
Manomboka amin'ny saga fanta-daza isika, izay amin'ity tranga ity dia miaraka amin'i Profesora Layton ny tenany. Amin'ity tranga ity dia mila mahita ilay harena malaza ao an-tanànan'i Saint-Mystère isika. Ho an'ity dia hahita làlana marobe amin'ny toerana maro isika. Sady ao amin'ny villa ihany no any amin'ny faritra hafa. Ny karazan-tsipika rehetra tsy maintsy hamahantsika, ary koa ny ankamantatra sy ny mistery hafa. Miovaova ny fahasarotany, na dia mirongatra aza ny fitomboan'ny fandrosoantsika. Tantara iray mihantona, saingy tsy dia sarotra loatra. Ankoatr'izay, manana sary kalitao izy io.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 10,99 euro, izay azo antoka fa lafo be. Tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny. Lalao tsara izy io, misy kalitao tsara, fa ny vidiny kosa dia mety hiteraka tsy hanomezana azy fotoana betsaka.
Iza ilay mpamono olona? Fizarana I
Ny anaran'ny lalao dia efa manome antsika mazava ny zavatra hataontsika amin'izany. Novonoina ny olona, ​​ary maro ny mpamono olona. Ka tsy maintsy hanao famotopotorana eo amin'ireo ahiahiana isika, hanangona famantarana ary amin'izay dia ho afaka hamaritra iza amin'ireo olona ireo no tompon'antoka tamin'ny famonoana olona. Ny fiasan'ity lalao ity dia tsy dia misy mistery loatra, saingy mampiala voly tokoa ny mandroso sy mahazo ny famantarana izay hametraka antsika akaiky kokoa amin'ny famahana ny heloka bevava. Tsy maintsy esorintsika daholo ny saintsika.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita doka. Soa ihany fa tsy dia manafika izy ireo.
Tranga Mistery Scooby-Doo
Lalao izay manambatra ny ampahany amin'ny mpitsongo miaraka amina toetra malaza sy mahafinaritra toa ny Scooby-Doo. Tsy maintsy hamaha mistery isan-karazany isika amin'ny lalao, toy ireo izay matetika fahita amin'ny fizarana na andian-tsarimihetsika. Izy io dia fifangaroana tsara karazana, hatramin'ny Ankoatry ny tsy maintsy famotopotorana sy famahana ireo mistery dia mahafinaritra sy maivana ihany izy io. Inona no mahatonga antsika hanana fotoana mahafinaritra amin'ny fotoana rehetra rehefa milalao. Ny sary dia kalitao. Tsotra kokoa noho ny lalao hafa amin'ny resaka fahasarotana izy io, fa tsara kosa ny mandany fotoana vitsivitsy amin'ny fialamboly.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy manana fividianana na dokam-barotra izahay ao anatiny.
NCIS: Heloka miafina
Ilay andiam-pahitalavitra fanta-daza, izay efa nandeha nandritra ny 20 taona teo ho eo, dia manana ny lalao ho an'ny telefaona Android. Tsy maintsy mandeha mamaha ny heloka bevava isika, toy ny andiany, miaraka amin'ny ekipa miaraka amin'i Gibbs eo an-tampony. Tsy maintsy mandalo ny dingana rehetra amin'ny famotopotorana isika hahazoana ny valiny andrasana ary hisambotra ilay olona nanao ny asa ratsy. Misy ny famantarana, tsy maintsy manontany vavolombelona isika, maka santionany, manadihady ny toerana misy ny asan-jiolahy, sns.. Ireo dingana rehetra tokony harahinay amin'ireo toe-javatra ireo.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Tsy fividianana an-tsitrapo ireo mba hirosoana amin'ny lalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao mpitsongo tsara indrindra ho an'ny Android
Inona ary ny fomba fampidinana apk amin'ny finday Android
Kaonty Facebook miisa 30 tapitrisa tratry ny hack